I-Hybrid City Alliance ijoyina i-BestCities Alliance ukuhambisa iSeshini ye-Campfire kwi-IMEX America
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » I-Hybrid City Alliance ijoyina i-BestCities Alliance ukuhambisa iSeshini ye-Campfire kwi-IMEX America
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Hybrid City Alliance ijoyina i-BestCities Alliance ukuhambisa iSeshini ye-Campfire kwi-IMEX America.
Abazimasi beseshoni baya kufunda imiba ephambili ekufuneka iqwalaselwe xa kucwangciswa imisitho ye-hybrid okanye ye-multi hub kwaye bafumane ukufikelela kumaphepha amhlophe aveliswe yi-Hybrid City Alliance, kunye ne-BestCities Global Alliance ngokubambisana ne-IAPCO.
I-Campfire Session inxalenye ye-IMEX yaseMelika ibonisa urhwebo oluya kubanjwa ngoNovemba 9 - Novemba 11 eMandalay Bay, eLas Vegas.
Ingxoxo-mpikiswano ijonge ukuphumela ekuqondeni okucacileyo kwamagama ahlanganisiweyo, adibeneyo, kunye nemisitho yeehabhu ezininzi.
Iseshoni ngokwayo iya kuqhubeka ngoLwesibini, ngoNovemba 9 ukusuka kwi-11: 30 ukuya kwi-12: 00 pm ixesha lendawo kwi-Inspiration Hub, i-booth C2009, ngaphandle kwentlawulo.
I-Hybrid City Alliance, uthungelwano lwehlabathi lwamahlakani akhuthaza intsebenziswano ukubonelela iingcali zeentlanganiso ngokufikelela kulwazi, ukusungula izinto ezintsha, kunye nezixhobo zokuvelisa iminyhadala exubileyo kunye nezixeko ezininzi, kunye BestCities Alliance, umanyano lwehlabathi lwezixeko ezili-11 ezisekwe ukusebenzisa amandla entsebenziswano kunye noluntu ukudala impembelelo eyakhayo ngokusebenzisa imisitho yoshishino, yazisa "Ukwenzeka kweHybrid: Sisonke singabandakanya ngempumelelo abaphulaphuli behlabathi" IMEX America Campfire Session.
Le seshoni iza kwamkela izithethi ezibini eziya kunceda abazileyo baqonde intsingiselo emva kweminyhadala edibeneyo, edibeneyo kunye ne-hub eninzi - amagama asetyenziswa rhoqo kwezi ntsuku:
UGlenn Duncan, i-VP ePhezulu kunye ne-CMO, i-Ottawa Tourism Business Events, egameni le-Hybrid City Alliance.
UJane Cunningham, uMlawuli, uBathatho loLuntu, Umanyano lweGlobalCities Global
Kutheni kufuneka samkele ihybrid
Indlela yokuhambisa imicimbi eyimpumelelo
Yiva amava, amahle, amabi kunye namabi
Yabelana ngamava akho e-hybrid ukunceda abanye
Ingxoxo-mpikiswano ijonge ukuphumela ekuqondeni okucacileyo kwamagama ahlanganisiweyo, adibeneyo, kunye nemisitho yeehabhu ezininzi. Abazimasi beseshoni baya kufunda amanqaku aphambili ekufuneka aqwalaselwe xa kucwangciswa imisitho ye-hybrid okanye i-multi hub kwaye bafumane ukufikelela kumaphepha amhlophe aveliswa ngu. I-Hybrid City Alliance, yaye Umanyano lweGlobalCities Global ngokubambisana ne-IAPCO.
Iseshini yaseCampfire yinxalenye ye IMEX yaseMelika imiboniso yorhwebo eya kubanjwa ngoNovemba 9 – 11 Novemba eMandalay Bay, eLas Vegas. Iseshoni ngokwayo iya kuqhubeka ngoLwesibini, ngoNovemba 9 ukusuka kwi-11: 30 ukuya kwi-12: 00 pm ixesha lendawo kwi-Inspiration Hub, i-booth C2009, ngaphandle kwentlawulo.